सक्षम गभर्नरका लागि आवश्‍यक ५ गुण
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ४ चैत
नेपाल राष्ट्र बैंकका १६औँ गभर्नर भाेलि बुधबारबाट बिदाइ हुँदै छन् । ५ चैत २०७१ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. चिरञ्जीवी नेपाल ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरन लागेका हुन् ।
राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउँदासमेत आगामी गभर्नर छनोट गर्ने समिति अहिलेसम्म बनेको छैन । केही पात्रहरू गभर्नर बन्नका लागि दौडधुपमा रहेका छन् । अन्तिम समयसम्म पनि गभर्नर यो नै हो भन्न सकिने स्थिति छैन ।
गभर्नर राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रकमभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि हो । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रभावकारी मुद्रा परिचालन गर्नका लागि नीतिगत निर्णय लिन सक्ने व्यक्ति पनि हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी व्यक्ति भएको नाताले गभर्नर धेरै गुणले परिपक्व हुनुपर्ने हुन्छ ।
यस सवालमा अहिलेका गभर्नर कति सक्षम भए, यो समीक्षाको विषय हो । यद्यपि, सफल गभर्नरमा हुनुपर्ने गुण के हुन् त ? कस्तो गभर्नर राष्ट्र बैंकलाई चाहिएको छ ? वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी आधारित विचार प्रस्तुत छ ।
गभर्नर हुनका लागि वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ । अन्यथा उसले सही नेतृत्व दिन नसक्ने मात्र होइन, वित्तीय क्षेत्र नै डामाडोल हुने अवस्था आउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई राम्ररी केलाउने र त्यसले राष्ट्रमा पार्ने प्रभावको अग्रिम मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता गभर्नरमा चाहिन्छ । राष्ट्रिय परिवेश समयमै बुझेर आवश्‍यकता निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता पनि अति आवश्‍यक छ ।
नीति र विधि बसाल्नका लागि अडान लिन सक्न महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आगामी गभर्नरका लागि ठूलो चुनौती अडान कायम नै छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिने प्रयास भएको सवालमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सक्षम गभर्नर बन्न दबाबको सामना गर्नुपर्ने गुण राख्नुपर्ने हुन्छ ।
अब आउने गभर्नरले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो काम भनेको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षति कम गर्नका लागि लिनुपर्ने निर्णय हो । राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण प्रभाव परेको व्यवसायमा राहत दिने विषयमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बोले पनि आवश्‍यक निर्देशन जारी गरेको छैन । यो नयाँ गभर्नरका लागि छाडेको डा. नेपालको भनाइ छ । उनले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रलाई भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा जस्तो समस्या परेको भन्दै उचित निर्णयको पर्खाइ रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ४, २०७६, १०:३२:००
अहिले नाफाका लागि व्यापार होइन, सेवाका लागि काम गर्न आवश्‍यक छ